चरणमा पेन्सिलको साथ केटी कसरी खिच्ने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कसरी केटीलाई पेंसिलमा चरणहरूमा राख्नुहुन्छ?
महिला सुन्दरताका प्रेमीहरूको लागि :) म एउटा केटीलाई नग्न चित्रित गर्ने योजना प्रस्ताव गर्नेछु :)
एक धेरै सुन्दर ड्राइंग, फिग्रा मध्यकालिन मूर्ति जस्तो देखिन्छ, भेनस भन्दा होइन :))
तपाईं यस योजना अनुसार एक आधुनिक केटी कोर्न सक्नुहुन्छ:
र यहाँ केटीहरूको पूर्ण विकासमा अर्को संस्करण छ। हामी योजना अनुसार रेखाचित्र:
कसरी गितारको साथ केटी तान्न
कसरी पूर्ण वृद्धि मा एक केटी को आकर्षित गर्न
केही चीज मैले हालसालै एक एनीममा अंकुश लगाए :), जसको मतलब यो हो कि एक एनिमेस शैलीमा हामी आज चरणमा कलमको साथ एउटी केटीलाई चित्रित गर्नेछौं: कान, पुच्छर, शरारती र धेरै मोबाइलको साथ :)
पहिले हामी टाउको बनाउँछौं
अब धड र हतियार
तल्लो आधा कोर्नुहोस्
विवरण रेखाचित्रमा तल झर्दै
र अब एक शराबी हेयरस्टाईल जोड्नुहोस्
कान र पुच्छर
हाम्रो सुन्दरता पोशाक
हामी थप लाइनहरू हटाउँछौं
यहाँ हामीसँग यस्तो रमाइलो सानी केटी छ :)
चरणमा पेन्सिलको साथ केटीलाई चित्रित गर्न, तपाईंसँग हुनुपर्दछ - बहु रंगीन पेन्सिल, सेतो कागज र फोटोमा हेर्नुहोस् - मैले तल संलग्न गरेको रेखाचित्र, ताकि तपाईंलाई केटि बनाउनको लागि सजिलो हुनेछ।
पहिले तपाईंले केटीको सामान्य प्रोफाइल कोर्न आवश्यक छ। त्यस पछि रेखाचित्रमा देखाइए जस्तै, आँखा, नाक, कपाल, मुख, भौहू र अन्य थप्नुहोस्।
हामी चरणमा पेन्सिलले केटीलाई तान्दछौं। एक भ्रामक कुरा, यदि तपाईं कलाकार हुनुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईंले चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक छ। हामी कागजको पाना, एउटा पेन्सिल, इरेजर र थोरै धैर्यको लागि तयार गर्नेछौं। केटिहरू फरक छन्, तर हामी एक विनम्रता कोर्नेछौं)))
उदाहरण को लागी, बन्द आँखों संग सपना देखी राजकुमारी
सबै भन्दा पहिले, हामी अंडाकार लिन्छौं - टाउकोको रूपरेखा, काँध र घाँटीको रेखारेखा
अब हामी अनुहार - नाक, आँखा, मुख, साथै कपाल र कानमा दर्शाउँछौं
अर्को चरण भनेको बोल्ड रेखाको साथ रूपरेखालाई स्पष्ट रूपरेखा बनाउनु हो।
अब सबै अतिरिक्त लाइनहरू मेटाउनुहोस् र छायाहरूमा काम गर्नुहोस् - सकियो!
केटीहरू सँधै सुन्दर हुन्छन्, विशेष गरी यदि तिनीहरू अझै आकर्षित गर्न अझै सुन्दर छन्। तपाईं एक केटीको चित्र कोर्न को लागी सिक्न सक्नुहुनेछ, यसको लागि तपाईलाई एक व्यक्तिको सही अनुहारको विशेषता कसरी खिच्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ। तपाईलाई राम्रो-तिखार्ने पेन्सिल, कागजको पाना र इरेज़र थप लाइनहरू मेटाउन आवश्यक छ। त्यहाँ चित्र को लागी एक टिप छ
चित्र को लागी त्यस्ता विकल्पहरु पनि छन्, तपाईले चरणहरु अनुसरण गर्नु पर्छ र तपाई सफल हुनुहुनेछ
र crayons वा महसूस-टिप कलमको साथ रंगिन सकिन्छ।
कहिलेकाँही हामी भावनाहरू तान्छौं र हामी एक व्यक्ति पाउँछौं, पुतली होइन। यस अवस्थामा, स्केलेटनको अनुपात र ज्ञान कायम राख्नु निर्णायक भूमिका खेल्दैन। यसलाई हेर्नका लागि पिकासोको काममा हेर्नुहोस्। यद्यपि हामी पिकासो होइनौं, हामी आफ्नै चीज बनाउन कोशिस गर्नेछौं।
यहाँ ड्यासिंग समस्या शुरू भयो।
हामी लाइन पछ्याउन जारी राख्छौं, तर शिष्टताका बारे नबिर्सनुहोस्)
यो जहाँ रेखाले हामीलाई नेतृत्व गर्‍यो।
हामी जोड दिन्छौं।
एक एशियाई केटी तपाईं सूट? यदि हो, त्यसो भए तपाईं यो योजना अनुसार चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ:
यदि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, तब तपाईं यो योजना प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ठिक छ, यदि हामी पहिले नै धेरै वयस्क छौं, तब अनुग्रहको अर्थमा अझ परिष्कृत केही चीजले हामीलाई अनुकूल गर्दछ।
मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न यो गाह्रो छ, तर यदि यसले केही फरक पार्दैन चित्र बनाउन केटी, त्यसो भए उदाहरणको रूपमा, यी योजनाहरू स्पष्ट रूपमा देखाउँनेछ कि कहाँ सुरु गर्ने।
विस्तृत उदाहरण विचार गर्नुहोस् र पहिलो अनुहार कोर्नुहोस्:
र अब हामी शरीर चित्रण गर्नेछौं:
यो पहिले नै इच्छा मा रंग।
यहाँ अर्को उदाहरण छ:
अवश्य पनि, अन्तिम परिणाम चित्र कोर्न को लागी र अभ्यास मा निर्भर गर्दछ, तर जो कडा मेहनत गर्छ सफल हुनेछ।
यी केटीहरूलाई चित्रित गर्न सकिन्छ।
मलाई यो कोमल र रोमान्टिक दृश्य साँच्चै मनपर्‍यो।
तपाईं यस्तो शैतान केटी आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ
र यहाँ बाइकमा केटी छ
र एउटा अर्को कुरा।
जब तपाइँ केटीलाई तान्नुहुन्न, उनी सदैव कृपालु हुनेछन्।
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,394 प्रश्नहरू।